युगसम्बाद साप्ताहिक - पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर
Wednesday, 01.29.2020, 11:02am (GMT+5.5) Home Contact
पुनःनिर्माणमा सत्र प्रकारका घर
Wednesday, 01.13.2016, 01:03pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले देशभरका ६ लाखभन्दा बढी निजी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भए भने तीन लाख घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै ९ हजार बढीको ज्यान गयो भने २० हजारभन्दा बढी घाइते भए । करीब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
विनाशकारी भूकम्प गएको ९ महिनापछि सरकारले औपचारिक रुपमा माघ २ गतेबाट पुनःनिर्माणको थालनी गर्ने भएको छ । अनेक राजनीतिक किचलोकाबीच राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अस्तित्वमा आएपछि भूकम्पले क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणको सुरुवात हुन लागेको हो । समयमै पुनःनिर्माण, राहत तथा सहायताको अभाव हुँदा यतिबेला भूकम्प पीडितहरुको जीवन निकै कष्टकर बनिरहेको छ । दर्जन बढी पीडित चिसोको शिकार भएर मृत्युको मुखमा पुगे । राजनीतिक स्वार्थको चर्को खेलको शिकार प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनता भए ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारसंग रकमको अभाव छैन । अभाव छ त केवल इच्छाशक्तिको । झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा थुप्रिएको छ भने दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरुले यसैका लागि भनेर झण्डै ४ सय अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पुनःनिर्माणको काम सुचारु नगरेको भन्दै दाताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै स्हयोग फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेकाबेला सरकारले वि.सं. १९९० को विनाशकारी भूकम्प गएको दिनको सम्झना गर्दै आउँदो माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा रानीपोखरी पुनर्निर्माण कार्य शुभारम्भ गर्दै पुनःनिर्माणको थालनी हुनेछ । राष्ट्रपतिको घोषणापछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा काम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले ग्रामीण र शहरी क्षेत्र गरी विभिन्न १७ किसिमका घरको डिजाइन तयार गरेको छ । प्राधिकरणले “वैशाख १२ मा गइहाल्यो भूँइचालो १ सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जुट्ने पालो” भन्ने नाराका साथ पुनःनिर्माणको कामको सुरुवात गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले १९९० साल माघ २ गते आएको भूकम्पको दिन पारेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको कामको थालनी गर्न लागिएको बताउँदै उहाँले रानीपोखरीसँगै आमजनताका घर तथा बस्ती पुनर्निर्माणको थालनी कार्यविनायक नगरपालिकाको बुङ्मतीबाट गर्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बुङ्मती क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरु गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले २ गते ४ बजे बुङ्मती क्षेत्रको पुनर्निर्माण गुरुयोजना लोकापर्ण गर्दै निर्माण अभियानको सुरुवात गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रममा नै पुनर्निर्माणका लागि कार्यविनायक नगरपालिका र बुङ्मती पुनर्निर्माण समितिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहका अनुसार भूकम्पपछि घर निर्माणको पर्खाइमा रहेका सबै प्रभावित परिवारका सदस्यले माघ २ गतेभित्रै सरकारले तयार पारेका घरका डिजाइन हेर्न पाउने छन् । यका लागि सरकारी तथा अन्य संघ–संस्थाको सहयोगमा सबै १७ वटा घरका डिजाइन पठाउने काम अगाडि बढिसकेको छ । घरवारविहीन जनताले हातमा परेको नक्सा हेरेर आफूअनुकूल घरको डिजाइन सहजै छान्न सक्नेछन् ।
विभागले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लालाई लक्षित गर्दै ग्रामीण र कम सहरी क्षेत्रमा उपयोगी हुनेगरी घरका नयाँ डिजाइन तयार पारेको छ । भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरी बनाइने नमुना आवास भवन २ लाख ८६ हजारदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने छन् । निर्माणकर्मीको तालिममा एकरुपता ल्याउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालिम सञ्चालन कार्यविधि ०७२ लागू भइसकेको छ । पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन देशमा करिब ५० हजार तालिमप्राप्त निर्माणकर्मी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।सुरक्षित भवन निर्माणको काम अगाडि बढाउन विभागले हालसम्म १२ हजार ५ सयजना निर्माणकर्मीलाई तालिम दिइसकिएको छ ।
त्यसो त घर बनाउन चाहनेले आफ्नो अनुकूलता अनुसार कुनै एक डिजाइन अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कसैलाई उक्त डिजाइन बाहेकको घर बनाउने इच्छा भएमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी नियकासँग घरको डिजाइन र नक्सा पास गराएर अन्य डिजाइनका सुरक्षित घरसमेत बनाउन सक्ने छन् । डिजाइनभन्दा पनि प्रविधिमा बढी जोड दिइएकाले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तोकिएअनुसारका कच्चापदार्थ तथा निर्माण सामग्री प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ ।
डिजाइन अनुसारको घर बनाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सहजै उपलब्ध हुने ढुंगा, माटो, काठ, इँटालगायत निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिने छ । नयाँ डिजाइन अनुसारको घर र प्राविधिक पक्षको पालना गर्ने हो भने तीन तलासम्मका घर बनाउँदा इन्जिनियरको आवश्यका समेत । तर, त्योभन्दा अग्ला भवन बनाउन अनिवार्य रूपमा इन्जिनियरले नक्सा, डिजाइन तयार पार्नुसाथै माटो परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ डिजाइन र प्रविधिअनुसार घर बनाउनेले तालिमप्राप्त डकर्मी, सिकर्मी तथा ठेकेदारको सहयोग भने लिनुपर्ने हुन्छ
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैयाँ राहत र केही रकम परिवार आफैँले थप गरेर नयाँ डिजाइनअनुसार घर निर्माण गर्न सक्नेछन् । यसका साथै सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँ ऋणसमेत पीडित परिवारले घर निर्माणका लागि पाउने छन् । डिजाइनमध्ये ‘स्टाब्लिस्ड सोयल ब्लक सिमेन्ट’ (सिएसएसबी) को प्रयोगबाट बनाइने एक तले तीनकोठे भवन सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा बनाउन सकिने छ ।
२ सय ७० वर्गफिट क्षेत्रफलमा बनाइने यस्ता घरका लागि २ लाख ८६ हजार खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै इँटा, सिमेन्टको प्रयोगबाट बनाइने साढे २ तलाको घरका लागि भने सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँ पर्ने छ । ढुंगाको प्रयोग गरेर घर बनाउनेको हकमा १८ इन्चको गाह्रो बनाउनुपर्ने हुन्छ भने इँटाको हकमा १४ इन्चको गाह्रो हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसै गरी, आरसिसी ढलान, काठको भुइँ, पाली भएको, भिरालो जग्गामा बनाउने घर, काठको दलिन, टिनको छाना भएको घरको डिजाइनअनुसार खर्च र घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित कामदर संख्यासमेत डिजाइनमा उल्लेख छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनालीका अनुसार भूकम्पपछि परिवर्तित अवस्थामा नयाँ बन्ने भवन तथा अन्य पूर्वाधारलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सरकारले विद्यमान निर्माण मापदण्ड तथा संहितालाई संशोधन गर्दै नयाँ मापदण्ड बनाउने, विगतमा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, नक्सा पास अनिवार्य गर्नेलगायत एकीकृत बस्तीको योजना अगाडि बनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कसैसँग झुकिंदैन (12.01.2015)
राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नै आँचआउने खतरा (11.25.2015)
आन्दोलन आतंक किन बन्दैछ ? (11.25.2015)
कांग्रेस र एमाओवादीको मधेशमोहको निहितार्थ (11.17.2015)